Windows တွင် Internet Options များကား အဘယ်နည်း - VidaBytes | LifeBytes
Windows တွင် Internet Options များကား အဘယ်နည်း
Encarni Arcoya | 04/05/2022 12:39 | လုံခွုံရေး
အင်တာနက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒုတိယအိမ်ဖြစ်လာသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် လူငယ်များသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် အချိန်ဖြုန်းရုံသာမက အခြားသော မျိုးဆက်များစွာလည်း ရှိသေးသည်။ ပြီးတော့ အကြိမ်တိုင်း ပိုတယ်။ ဒီတော့၊ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကအရေးကြီးတယ် ဤကိစ္စတွင်၊ Windows ရှိ အင်တာနက် ရွေးချယ်မှုများသည် သင့်အား ကူညီနိုင်ပါသည်။ ဒါမှ ကြီးလေးတဲ့ ပြဿနာတွေ မကြုံရအောင်။
သင်သိသည့်အတိုင်း ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ရှာဖွေနေပါ။ က်ဘ်ဆိုက် ၎င်း၏နောက်ကွယ်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များစွာရှိပြီး ၎င်းသည် ဤ Windows လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စွာမပြင်ဆင်ပါက ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် ဟက်ကာများ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် "နောက်တံခါး" ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့ မင်းကို လက်တစ်ကမ်း ပေးမလား။
1 Windows Internet Options တွေက ဘာတွေလဲ။
2 Windows တွင်အင်တာနက်ရွေးချယ်ခွင့်များဝင်ရောက်နည်း
3 ဒီ applet ကို ဘယ်လို configure လုပ်မလဲ။
Windows Internet Options တွေက ဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်မည့် ပထမဆုံးအရာမှာ Windows ရှိ အင်တာနက်ရွေးချယ်မှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည့်အရာကို သင်နားလည်ရန်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ ဒါတွေပါ။ Control Panel တွင်တွေ့ရသော ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့် ဝဘ်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာ ကွဲပြားခြားနားသော အခြားရွေးချယ်စရာများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဥပမာ၊ သင့်ကွန်ပြူတာကို သင့်ကလေးငယ်က လည်ပတ်နေတယ်လို့ မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ အရွယ်မရောက်သေးသူများအတွက် မသင့်လျော်သော စာမျက်နှာအချို့ကို သင်သည် မတော်တဆ မဝင်စေလိုပါ။ ဒါမှမဟုတ် ပိုဆိုးတာက တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုံခြုံရေးစာမျက်နှာကို ဝင်လိုက်ပါ။ အဲဒီအတွက်, အင်တာနက်ရွေးချယ်မှုများကို Windows တွင် configure လုပ်ထားသည်။ သောကြောင့် မတူညီသော စာမျက်နှာများကို မည်သို့ဝင်ရောက်ရမည်၊ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်ရန်တို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရာတွင် သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
ဤအက်ပလီကေးရှင်းတွင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များထဲမှ အချို့သော အသုံးအများဆုံးများမှာ- cookies များကိုထိန်းချုပ်ပါ။ (သင်ခွင့်ပြုချက်ရှိပါက ငြင်းပယ်ရန်) ဝဘ်စာမျက်နှာများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများကို ပိတ်ဆို့ပါ၊ အချို့သောစာမျက်နှာများတွင် လုံခြုံရေးကို ထိန်းသိမ်းပါ။...
ဒါပေါ့, ၎င်းသည် သင့်အား ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်သော ဟက်ကာများထံမှ 100% မကာကွယ်နိုင်ပါ။. ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ သူတို့က မင်းအတွက် ပိုခက်ခဲစေလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည် ဤအက်ပလီကေးရှင်းကို တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးပါက၊ ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသနည်း သို့မဟုတ် ၎င်းထံသို့ မည်သို့ရောက်ရှိရမည်ကို သင် တွေးတောနေပေမည်။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ ထည့်တယ်။ Windows ဗားရှင်းတစ်ခုစီသည် မတူညီသောလမ်းကြောင်းများကို ပေးဆောင်သည်။သင့်အတွက် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ အရမ်းလွယ်ကူပြီး ဒီရွေးချယ်စရာတွေကို မတူညီတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ သင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ:
En Windows ကို 10 y Windows ကို 8 မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေညာဘက်မှသင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။. ချိတ်ဆက်မှုအိုင်ကွန်ပေါ်တွင် ညာဖက်မောက်စ်ခလုတ်ကို ပေးလျှင် သင်ရရှိသည်ကို သင်တွေ့ရပါမည်။ “ကွန်ရက်နှင့် အင်တာနက် ဆက်တင်များကို ဖွင့်ပါ။“ ဟိုတစ်ခါသွားပါ"ကွန်ယက်နှင့်မျှဝေရေးစင်တာ“ ပြီးတော့၊ "Internet Options ကို"။
En Windows ကို 7ချိတ်ဆက်မှုခလုတ်ပေါ်တွင် ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ခြင်းသည် သင့်အား « တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေးသည်Network and Sharing Center ကိုဖွင့်ပါ။“ ပြီးတော့ အဲဒီကနေ “အင်တာနက် ရွေးချယ်စရာများ” ကို သွားပါ။
သို့သော် ၎င်းကိုပင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်သည် Windows ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် Internet Options များကို ထည့်သွင်းပါက၊ ၎င်းသည် သင့်အား မည်သည့်အရာကိုမျှ လုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ Windows ဗားရှင်းတွင် တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပေးသင့်သည်။
ဒီ applet ကို ဘယ်လို configure လုပ်မလဲ။
Windows တွင် အင်တာနက်ရွေးချယ်စရာများကို သင်ထည့်သွင်းထားသည်။ တက်ဘ်တွေအားလုံးကို သင်မြင်ပြီးပြီ၊ သူတို့မှာ ဘာရှိလဲ သိလား... အခု ဘာဖြစ်လဲ? အေးအေးဆေးဆေး၊ တဘ်တစ်ခုစီကို နားလည်ရန်နှင့် ၎င်းကို မည်သို့ configure လုပ်ရမည်နည်း။.
သင်အင်တာနက်ရွေးချယ်မှုများသို့သွားသောအခါ tab7ခု တွေ့ပါလိမ့်မယ်။. ၎င်းတို့တစ်ခုစီတွင် မတူညီသော ကဏ္ဍများ သို့မဟုတ် အပိုင်းခွဲများရှိသည်။ အဲဒါတွေကို သေသေချာချာကြည့်ရအောင်။
ဤသည်မှာ သင့်တွင်ရှိသော Windows ဗားရှင်းပေါ်မူတည်၍ အများဆုံးပြောင်းလဲသည့် တက်ဘ်ဖြစ်သည်။
သင့်တွင် Windows 10 ရှိပါက၊ ၎င်းကို အောက်ပါတို့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်သည်။
URL ကို သင် သတ်မှတ်နိုင်သည့် ပင်မစာမျက်နှာ browser အတွက်။
စတင်သည်။ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်သောအခါတွင် ဗလာစာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်လာစေလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန်၊ သင်တွေ့ခဲ့သည့် နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်...
Tabsဝဘ်ပေါ်တွင် တက်ဘ်များပေါ်လာပုံကို ပြောင်းလဲရန်၊
ရှာဖွေမှုမှတ်တမ်းကွတ်ကီးများ၊ ဖောင်အချက်အလက်၊ စကားဝှက်များနှင့်အတူ ၎င်းကို ဖျက်နိုင်သည့်နေရာ... ၎င်းကို အမှတ်အသားပြုပါက၊ ဘရောက်ဆာကို သင်ပိတ်သည့်အခါ အရာအားလုံးကို ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။
အသွင်အပြင်ဘာသာစကား၊ ဖောင့်၊ ဝင်ရောက်နိုင်မှုတို့ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်...
သင့်တွင် Windows 11 ရှိလျှင် သင့်တွင် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုသာ ရှိလိမ့်မည် ။ စူးစမ်းမှုမှတ်တမ်းငါတို့ရှင်းပြသည်အတိုင်း သင်တို့ပြုကြလိမ့်မည်။ Y အသွင်အပြင်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံခြုံရေးအပိုင်းသို့ သွားပါ။ ဤသည်မှာ သင် configure လုပ်မည့်နေရာဖြစ်သည်။ အင်တာနက်အတွက် မင်းရဲ့အဆင့်က ဘယ်လောက်လဲ။.
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ သင်သည် အမျိုးအစားလေးခုကို တွေ့ရလိမ့်မည်- အင်တာနက်၊ ပြည်တွင်းအင်တာနက်၊ ယုံကြည်ရသောဆိုက်များနှင့် ကန့်သတ်ထားသောဆိုက်များ.
တစ်ခုစီ၌ လုံခြုံရေးပုံစံကို သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပြည်တွင်းအင်တာနက်သည် ဝင်ရောက်ခွင့်မပြုခြင်း သို့မဟုတ် သင်မဝင်နိုင်သော မည်သည့်ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ပြောပါ။
သင်ဟာ သင်ရှာဖွေနေပြီး ပေါ်လာတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို ရရှိတဲ့အခါ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ သူတွေထဲက တစ်ယောက်လား။ ကောင်းပြီဒီမှာသင်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။. သင်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာကို မတောင်းဆိုရန်လည်း သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် သင်သည် သီးသန့် သို့မဟုတ် ရုပ်ဖျက်မုဒ်တွင် ရှာဖွေနိုင်ရန် အရာအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။
ကောင်းသောအရာသည် ဝဘ်စာမျက်နှာများကို မပြသနိုင်အောင် သင်သတ်မှတ်နိုင်သည်။.
ဤတက်ဘ်တွင် အောက်ပါတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရလိမ့်မည်-
လက်မှတ်များသင့်တွင်ရှိသော လက်မှတ်များကို ထည့်ရန် သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့်နေရာ။ အဲဒါတွေကဘာလဲ? သင့်ကိုယ်သင် ပကတိလူတစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်စေသော သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းဖောင်ပုံစံများအတွက် လက်တွေ့ကျကျ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်စေသော အရာများ။
အော်တိုပြီးဆုံး. ၎င်းသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၊ ဖောင်များတွင် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဝဘ်စာမျက်နှာများတွင် သင်ရေးထားသည့်အရာများကို သိမ်းဆည်းခွင့်ပြုခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။
Fuentes. ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဝဘ်စာမျက်နှာများ၏ အပ်ဒိတ်အကြောင်းအရာကို မည်သည့်နေရာတွင် ပေးမည်နည်း။
ဤတက်ဘ်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက် Internet access ကို configure လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။မိုဘိုင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Router ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ WiFi… ပင်ဖြစ်စေ ပရောက်စီဆာဗာ သို့မဟုတ် VPN ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ထည့်နိုင်သည်။.
ဤနေရာတွင်၊ General tab တွင်ကဲ့သို့၊ Windows 10 နှင့် 11 အကြား ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ အထူးသဖြင့်၊ Windows 10 တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှိသည်-
Internet Explorer ကိုဖွင့်ခြင်း။၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား လင့်ခ်များဖွင့်နည်းကို စီစဉ်သတ်မှတ်နိုင်စေမည့်နေရာ။
ပလပ်အင်များကိုစီမံပါကွန်ပျူတာပေါ်တွင် ထည့်သွင်းထားသော ပလပ်အင်များကို ဖွင့်ရန် သို့မဟုတ် ပိတ်ရန်။
HTML တည်းဖြတ်ခြင်း။HTML ဖိုင်များကို တည်းဖြတ်ရန် မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုရမည်ကို သိရှိရန်။
အင်တာနက်ကိုအစီအစဉ်များအခြားအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရန် ပရိုဂရမ်အား ကျွန်ုပ်တို့ သတ်မှတ်ပေးမည့်နေရာ (ဥပမာ အီးမေးလ်)။
ဖိုင်အသင်းများဖိုင်အမျိုးအစားများကို ရွေးချယ်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကို ပုံသေဖြင့်ဖွင့်နည်း။
Windows 11 တွင် ထိုရွေးချယ်စရာနှစ်ခုသာရှိသည်- အပိုပရိုဂရမ်များကို စီမံပါ။ နှင့် အင်တာနက် အစီအစဉ်များ။
နောက်ဆုံး tab ကိုရည်ရွယ်သည်။ ဘရောက်ဆာ၏ မတူညီသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို activate သို့မဟုတ် မလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် ကိရိယာများကို ပေးဆောင်ပါ။. ဥပမာအားဖြင့်၊ HTTP ပရိုတိုကောကို ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း၊ ဝင်ရောက်နိုင်မှု၊ ဂရပ်ဖစ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ TLS ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်း၊ မာလ်တီမီဒီယာဒြပ်စင်များကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း...
ယခု သင်သည် Windows တွင် မည်သည့်အင်တာနက်ရွေးချယ်ခွင့်များရှိပြီး ၎င်းတို့ကို စီမံခန့်ခွဲရမည်ကို သင်သိပြီးဖြစ်၍ စမ်းသပ်မှုအချို့ပြုလုပ်ရန် အချိန်ကျရောက်ပြီဖြစ်သည်။ သံသယများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကူညီရန် ကြိုးစားပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - LifeBytes » လုံခွုံရေး » Windows တွင် Internet Options များကား အဘယ်နည်း